Ra'isul Wasaare Khayre iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Gaaray Switserland[SAWIRRO] | SAHAN ONLINE
DAVOS-Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Davos ee dalka Switzerland,halkaasi oo ay kaga qeyb galayaan shirka dhaqaalaha adduunka (World Economic Forum) oo dhowaan ka furmaya dalkaasi.
Ra’isul Wasaaraha waxaa safarka ku weheliya Wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caaliga Jamaal Maxamed Cabdi iyo xildhibaano ka tirsan gollaha barlamaanka.
Shirkan Waxaa ka qeyb geli doona Madax ka socota Dowladaha dhaqaalahoodu hormarsan yahay iyo madaxda qaarada Afrika qaarkood, iyadoo shirkaasi diiradda lagu saari doono horumarinta dhaqaalaha adduunka iyo sidii loo taageeri lahaa dalalka soo koraya oo Soomaaliya ay ku jirto.
Xasan Cali Khayre Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kulamo gooni gooni ah uu la yeesho Madaxda ka qeyb galeysa shirkan, waxaana uu sheegay inay tahay markii u horraysay ee Soomaaliya ka qaybgasho shirkaasi
“Aniga iyo wefti aan hoggaaminayo ayaa gaarnay Davos, Switzerland si aan uga qeyb galno shirka madasha dhaqaalaha adduunka. Shirkan oo ah markii ugu horreysay ee soomaaliya ka qeyb gasho ayaan ku rajo weynahay inuu jid cusub u furi doono koboca dhaqaalaha dalka”
Shirkan oo sanadkii mar la qabto, wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay Soomaaliya maadaama ay ka qeybgalayaan hoggaamiyaal ka kala socoda wadamada ku horumaray dhinaca Dhaqaalaha oo uu kujiro Mareykanka,waxaana lagu casuumay Soomaaliya iyo wadamo kale oo Afrika kamid ah qaar kood.